Mmetụta Semalt kpugheere Mpempe akwụkwọ Meta Meta Meta Iji Mee Ka Mgbasa Ozi SMM gị
Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịga nke ọma n'ịmepụta azụmahịa na-aga n'ihu n'ịntanetị. Dị ka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume na ndị mmadụ na-eji ọrụ ndị a iji mee ka ozi ndị dị mkpa maka ịnọgide na-eme atụmatụ atụmatụ ịntanetị nke ọma. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị mmadụ na-eji ohere nke ịme ahịa ka ha nwee ọganihu n'achụmnta ego. Ahịa ahia ahịa dịka Social Media Marketing (SMM) nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị ga-enwe ọganihu n'ahịa azụmahịa. Enwere ike ime ọtụtụ ihe ndị mmadụ na - emepụta nnukwu uru site na ahịa Twitter.
Ntuziaka a, nke Nik Chaykovskiy nyere, Onye Ọrụ Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta Semalt , nwekwara ike inyere onye ọrụ ahụ aka inweta ọtụtụ akụkụ nke mmepe weebụ dị ka ihe e kere eke weebụ.
Ọrụ Ntanetị Mgbasa Ozi Ntanetị dịka ahịa ahịa Twitter nwere ike inyere ndị mmadụ aka ime ọtụtụ ọganihu na ụzọ ndị ahịa si esi tinye njikọ weebụsaịtị ha - беспроводная точка доступа цена. Twitter bụ ụdị SEO mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị ọrụ na ngalaba a na-eji tweeting. Ị ga-enwe ike iru ọtụtụ nde ndị ahịa nwere ike ịbanye na niche gị site na iji usoro nyocha kachasị mfe Twitter. Dịka ọmụmaatụ, iji mkpado Twitter atọ na-enyere ndị mmadụ aka inweta ọtụtụ ihe ịga nke ọma na akụkụ a.
Mee usoro ndebe
Na SEO, nchọpụta isiokwu bụ akụkụ dị mkpa..Maka ọnụọgụ abụọ nke SMM, akara mkpado na nkọwa kwesịrị inwe ụfọdụ ọdụ isiokwu maka iji na ogo. Maka webmasters na-adabere na SMM, Twitter meta mkpado kwesịrị inwe mkpụrụokwu ndị a nke na-enyere aka na ogo. Nchọgharị njikwa Twitter nwere ụfọdụ njinke search engines nke nwere ike ime ka ndị ọzọ n'ime niche gị maka ọdịnaya gị. Ọ dịkwa mkpa ịmepụta ndebiri ụkpụrụ maka ọrụ ndị a. Ebumnuche SEO nwere ike izipu ndebiri aha nke onye ọ bụla. Webmasters na-eji ihe eji emepụta nke ọma nwere uru nke ime ngwa ahụ ngwa ngwa. Enwere koodu API dị mfe nke ndị ọrụ na-eji mee ka usoro ahụ dum nwee ihe ịga nke ọma.
Jiri isiokwu n'ime ọdịnaya gị
Maka nyocha ọ bụla nke isiokwu ọ bụla, SEO chọrọ ederede ogologo ọdụ maka iji mee ihe na akụkụ dị mkpa nke ọdịnaya weebụ. Nkọwa nkọwa ahụ, yana akụkụ ndị ọzọ nke ọdịnaya, chọrọ ozi nke ndị ọrụ nke ịntanetị nwere ike ịchọpụta. Ndị mmadụ na-emepụta echiche dị iche iche nke ngwaahịa mgbe ị na-enye ozi Twitter dị ka ihe kacha mkpa na bọtịnụ Search Engine Optimization maka ebe nrụọrụ weebụ. Ọtụtụ usoro nlekọta ọdịnaya nwere akụkụ dịgasị iche iche nke inyere ndị mmadụ aka ịgbanwe mgbanwe dị mkpa ka ụzọ weebụsaịtị na-azaghachi mkpa ndị ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, kaadị onyinye Twitter na nchịkọta ọchụchọ Twitter na-enyere ndị ọrụ Twitter aka ịchọta ma mee mgbanwe dị mkpa maka mgbasa ozi mgbasa ozi ha na akụkụ ndị ọzọ nke mmepe weebụ.
Nchọpụta Nchọpụta Mmasị nwere ike inyere onye ọ bụla webmaster aka ruo ọtụtụ nde ndị ahịa site na usoro ahịa dị mfe. Ọ nwere ike ime ka mmekọrịta Social Media Marketing, tinyere ngwaọrụ SEO ndị ọzọ, mee ka ndị na-azụ ahịa gbanwee gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị. E nwere ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-eji mee ka mgbasa ozi ahịa ha gaa nke ọma. N'okwu ndị dị mkpa, mkpado Twitter nwere ike ịdị mkpa maka izipu ozi nzi. Ị nwere ike ịme ọtụtụ mgbanwe na ụzọ Twitter ga-esi ruo ohere kachasị ha.